लक्ष्मण गाम्नागे Total Record 326
२०४६ पछिको नेपाली हास्यव्यङ्ग्य लेखनमा सक्रिय रहेका हस्ताक्षरहरू मध्येका एक लक्ष्मण गाम्नागेको जन्म वि.सं. २०२१ साल पुस २९ गते भुटानमा भएको थियो । पिता चिदानन्द भट्टराई र माता लक्ष्मी भट्टराईका सुपुत्र लक्ष्मण गाम्नागेको न्वारनको नाम भने लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई हो । आफ्नो पितृथलो ओखलढुङ्गाको गाम्नाङलाई आत्मसात गरी गाम्नागे उपनाम राख्ने लक्ष्मण २०४४ सालदेखि हास्यव्यङ्ग्य लेखनयात्रामा ओर्लिएका देखिन्छन् । ‘जम्बुमन्त्री’, ‘साँल्दाइ’, ‘खोयाबिर्के’, ‘चरीमुखे’, ‘चारआँखे’, लक्ष्मी शर्मा आदि उपनामद्वारा पनि कलम चलाउँदै आएका छन् लक्ष्मण ।
२०४४ देखि २०४६ सालसम्म प्रकाशित रहेको ‘रकेट’ मासिक पत्रिकाका सम्पादक लक्ष्मणको पहिलो प्रकाशित हास्यव्यङ्ग्य रचना ‘फाइटर ज्याक्सनलाई पत्र’ हो । यो २०४४ सालमा ‘रकेट’ मै छापिएको थियो । २०४८ देखि २०५४ सम्म प्रकाशित ‘चड्कन’ हास्यव्यङ्ग्य द्वैमासिकको सम्पादनमा सक्रिय रहेका उनी ‘हासिस’ (हास्यव्यङ्ग्य सिर्जन समूह) मा पनि संलग्न थिए । उक्त संस्था हाल अस्तित्वमा रहेको छैन । हास्यव्यङ्ग्यका विविध गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको ‘सिस्नुपानी नेपाल’ का संस्थापक निर्देशक लक्ष्मण सिस्नुपानीका मेरुदण्ड मानिन्छन् र ‘सिस्नुपानी’ पत्रिकाको सम्पादनमा समेत संलग्न रहेका छन् । भैरव अर्यालका हास्यव्यङ्ग्य कृतिहरू र डा. गोविन्दराज भट्टराई (दाजु) सँगको सङ्गतबाट हास्यव्यङ्ग्य लेखनमा प्रेरित र प्रभावित लक्ष्मण गद्य र पद्य दुवै विधामा हास्यव्यङ्ग्य रचना गर्न सिपालु देखिन्छन् ।
“हास्यव्यङ्ग्य रचना लेख्नु भनेको एक किसिमले आफैसँग लाप्पा खेल्नु हो । आफूसँगैको लडाइँमा पनि कहिले हारिन्छ कहिले जितिन्छ । आफूलाई समेत जितेर लेखेको हास्यव्यङ्ग्य उत्कृष्ट हुन्छ । परिस्थितिले आफैंलाई दनादन दनक दिन थालेपछि मैले पनि प्रतिकारमा हास्यव्यङ्ग्यको दनक दिन थालेको हुँ” भन्छन् लक्ष्मण गाम्नागे । हास्यव्यङ्ग्य शैलीलाई आत्मसात गरेर लक्ष्मणले यो देशको विद्रूप स्थितिका प्रायः सबै पाटा र पक्षहरूको यथातथ्य उत्खनन गरेका छन् । कविता, निबन्ध, नाटक/प्रहसन, समीक्षा, कथा, हास्यव्यङ्ग्य पत्र, टेलिश्रृङ्खलाका पटकथाकार आदिको रूपमा समेत देखिएका लक्ष्मण वर्तमान बेथितिको उछित्तो काड्न उद्यत रहेका छन् । २०४६ पछिको नेपाली हास्यव्यङ्ग्य लेखनमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति जाहेर गर्दै सृजनामा तल्लीन छन् ।